Uzihlaziya njani iibhalbhu zokukhanya: iintlobo, zenziwe ngazo kwaye zilahlwa phi | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Phinda usebenzise iibhalbhu zokukhanya
Iibhalbhu zokukhanya ziyinkunkuma eqhelekileyo yasekhaya kuwo onke amakhaya. Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona i-bulb ayisiyonto ilula ukuyenza. Uhlobo ngalunye lwebhalbhu luphinda lusetyenziswe ngendlela eyahlukileyo, eneneni ezinye iibhalbhu aziphinde zenziwe ntsha. Baninzi abantu abazi ukuba njani ziphinde zisetyenziswe iibhalbhu nokuba kungenziwa ntoni na ngabo.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela yonke into oyifunayo malunga nendlela yokusebenzisa kwakhona iibhalbhu zokukhanya kunye neempawu zazo.
1 Phinda usebenzise iibhalbhu ezisetyenzisiweyo
2 Iindidi zebhalbhu
3 Uyisebenzisa njani kwakhona iibhalbhu zokukhanya ngobuchule
4 Apho ziphinde zenziwa kwakhona ngohlobo lwazo
Phinda usebenzise iibhalbhu ezisetyenzisiweyo
Nangona kubonakala kungaqhelekanga, njengoko besesitshilo ekuqaleni, ayizizo zonke iibhalbhu ezinokuphinda zisetyenziswe. Izibane zeHalogen kunye neebhalbhu ze-incandescent azifakwanga kwi-WEEE, yona Ngummiselo olawula ulawulo oluchanekileyo lokusingqongileyo kwenkunkuma yombane kunye nezixhobo zombane.
Ke ngoko, sinokuphinda sisebenzise ii-bulbs ze-fluorescent, ukukhupha iibhalbhu kunye nee-LED. Singazisebenzisa kwakhona izibane. Kwelinye icala, ii-halogen kunye neebhalbhu ze-incandescent aziphinda zisetyenziswe. Nangona kunjalo, njengoko uza kubona kamva, zinokusetyenziselwa iiprojekthi ezinomdla kakhulu ze-DIY. Oku kuyakuxhomekeka kuhlobo lweebhalbhu esifuna ukuzilahla, kuba ulawulo lwe-CFL (usetyenziso olusezantsi) iibhalbhu yahluke ngokupheleleyo kulawulo lwee-bulbs ze-LED. Awusoze waphosa ibhalbhu kwisitya seglasi.
Kukho iindidi ezininzi zebhalbhu zokukhanya kwaye kuxhomekeke kuhlobo lwazo, ezinye iinkalo kufuneka zithathelwe ingqalelo. Makhe sibone ukuba zintoni:
Iibhalbhu ze-filament: Kuba ezi ntlobo zezinto zokukhanyisa, ezinjengezibane ze-halogen, zingenakuphinda zenziwe kwakhona, kufuneka sizilahle kwizikhongozeli ezingwevu okanye ezimnyama (kuxhomekeke kubemi). Kule nto yenkunkuma, ekwabizwa ngokuba yinxalenye eseleyo, ezo zinto zingenazo izikhongozeli zokurisayikilisha ziyalahlwa.
Ukugcina amandla okanye iibhalbhu ezibengezelayo: Olu hlobo lwe-bulb luqulethe i-mercury, ngenxa yoko ayinakulahlwa kwindawo yenkunkuma okanye nasiphi na isikhongozeli sokurisayikilisha. Kuyimfuneko ukubasa kwindawo ecocekileyo apho baya kulahlwa ngokukhuselekileyo ukuze iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona.
Iibhalbhu ze-LED: Ezi iibhalbhu zinezinto ezinokusetyenziswa kwakhona zombane. Ukuze ukwazi ukuwaphatha ngokuchanekileyo kufuneka uwahambise kwindawo yokucoca efanelekileyo.
Uyisebenzisa njani kwakhona iibhalbhu zokukhanya ngobuchule
Ukusetyenziswa okuyilayo kwakhona, okwaziwa ngcono njengokuhlaziya ukwenziwa ngokutsha kwezinto ebesezisetyenzisiwe, kubandakanya ukuguqula izinto ezilahliweyo okanye ezingasasebenziyo kwiimveliso ezintsha ezikumgangatho ophezulu okanye ixabiso lendalo. Akukaze kucetyiswe ukuba kusetyenziswe ii-bulbs ze-fluorescent kwezi projekthi, kuba zine-mercury enetyhefu. Kule meko, siza kuzisa ezinye izimvo ukubonelela ngokusetyenziswa okutsha kwee-bulb ze-incandescent ezindala.
Vase encinci: Ngokususa inxenye yesivalo kunye nocingo lwangaphakathi, singasebenzisa ibhalbhu njengevasi yokubeka iintyatyambo ezincinci. Singabeka isiseko kuzo kwaye sihombise itafile okanye ishelufu, okanye ukuba sidibanisa ezinye iintambo okanye iingcingo ukuzixhoma, siya kuba negadi ethe nkqo emileyo.
Irack yedyasi: Ibhalbhu ayinanto ngaphakathi, kufuneka sibeke isamente kuyo, sibeke isikrufu kuyo kwaye silinde ukuba iqiniswe. Ngoku kufuneka senze umngxunya omncinci eludongeni kwaye sibeke iqokobhe lethu ledyasi. Singayisebenzisa ukuvuselela izibambo zazo zonke iintlobo zeminyango.
Izibane zeoyile: Njengamaxesha onke, into yokuqala yokwenza kukususa i-filament kwi-bulb. Okulandelayo kuya kufuneka sibeke ioyile okanye utywala kwizibane okanye iitotshi kwaye sibeke umsonto.
Imihlobiso yeKrisimesi: Ngeebhalbhu ezindala ezimbalwa ezinokuzenzela sinokuhombisa umthi weKrisimesi. Kufuneka nje sibapeyinte ngeempawu esithanda kakhulu kwaye songeze intwana yomsonto ukuxhoma kubo.
Iiterrariums: Ngamatye athile kunye nesityalo esincinci okanye isiqwenga semoss singenza i-terrarium. Njengakwizitya ezincinane sinokubeka isiseko okanye ukuzixhoma.
Ukuhambisa ngenqanawa kwibhalbhulethi: Ngendlela efanayo nokuba yibhotile, sinokwakha inqanawa ngaphakathi kwebhalbhu yethu yokukhanya.
Apho ziphinde zenziwa kwakhona ngohlobo lwazo
Iibhalbhu zokukhanya zizinto ezisebenzisa umbane ukukhanyisa ikhaya lethu xa ilanga linyamalele. Kukho iindidi ezininzi zebhalbhu ezinokuthi zihlelwe ngokuchanekileyo ngokusetyenziswa kwamandla, ixesha lokuphila, okanye ubungakanani bokukhanya abakukhuphayo. Ezi zezona ntlobo ziphambili zebhalbhu zokukhanya ezikhoyo:
Las Iibhalbhu ezibengezelayo ziibhalbhu zesintu. Ngo-2012, ukuveliswa kwayo kwavalwa kwi-EU ngenxa yobomi bayo obufutshane kunye nokusetyenziswa kwamandla aphezulu.
La Ibhalbhu yehalogen ikhupha isibane esinamandla kakhulu kwaye ivula kwangoko. Zikhupha ubushushu obuninzi kwaye ubomi bazo obuluncedo bunokwandiswa.
Las Ukonga umbane iibhalbhu Banobomi obude kakhulu kunee-bulbs zangaphambili kwaye basebenza kakuhle.
Alithandabuzeki elokuba Iibhalbhu ezikhokelwayo zezona ezizinzileyo kwimarike. Azinayo i-tungsten okanye i-mercury, banobomi obude kakhulu kwaye badla kakhulu ngaphantsi kwazo zonke iimveliso ezikhankanywe ngasentla.
Unokucinga ukuba iibhalbhu ezinokuhambisa izinto zeglasi ziya kungena kwisitya esiluhlaza, kodwa ayilunganga. Ukongeza kwiglasi, ibhalbhu inezinye izinto ezininzi, ekufuneka zahlulwe ngaphambi kokulahla. Kungenxa yoko le nto ibhalbhu kufuneka icocwe.
Ukuququzelela lo msebenzi kunye nokurisayikilisha ngokufanelekileyo inkunkuma, i-AMBILAMP (umbutho ongajonganga kwenza nzuzo ojolise ekuphuhliseni inkqubo yokuqokelelwa kwenkunkuma kunye neenkqubo zonyango) ikwenzile okunye okunokwenzeka iindawo zokuqokelela inkunkuma zeebhalbhu, apho nawuphina ummi anokuzithatha azisebenzise. Ngokubanzi, la manqaku abekwe kwiinkampani okanye kubasasazi bezixhobo zasekhaya, ezinje ngeevenkile zehardware, iivenkile zokukhanyisa okanye iivenkile ezinkulu, apho nawuphina ummi anokuthabatha iibhalbhu ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo. Ngokukodwa, ezi ndawo ziqokelelweyo zigxile ekuqokeleleni izibane ezibengezelayo, izibane zokonga umbane, ukukhupha izibane, iibhalbhu ze-LED kunye nezibane ezindala.
Inkqubo yokurisayikilisha kweebhalbhu zokukhanya iqala ngokwahlulahlulahlula izinto ezizenzileyo. Imekyuri kunye ne-phosphorus zahluliwe emva kwenkqubo yokuhluza kwaye zigcinwe ngokukhuselekileyo. Iiplastikhi ziya kwizityalo zokurisayikilisha iiplastiki, iglasi kwizityalo zesamente, iglasi kunye nomzi mveliso we-ceramic, kunye nesinyithi kwiziseko. Zonke ziya kunika ubomi kwizinto ezintsha.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nendlela yokusebenzisa kwakhona iibhalbhu zokukhanya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Phinda usebenzise iibhalbhu zokukhanya